Qorshe Xilka looga qaadayo Madaxweynaha Koofur galbeed oo ka socda magaalada Muqdisho – GOBOLADA.COM
May 24, 2022 May 24, 2022 AbdukadirLeave a Comment on Qorshe Xilka looga qaadayo Madaxweynaha Koofur galbeed oo ka socda magaalada Muqdisho
Xildhibaan Mahad C/raxmaan Aadan oo ka tirsan golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya ayaa shaaciyay in magaalada Muqdisho uu ka bilowday qorshe la doonayo in xilka loogaqaado Madaxweynaha Koonfur Galbeed.
Xildhibaan Mahad Cabdiraxmaan ayaa kulan ka dhacay Magaalada Baydhabo ka sheegay in loo baahan yahay in loo midoobo sidii Dadka Koonfur Galbeed uga hortagi lahaayeen abaabulka socda ee xilka looga tuurayo Laftagareen.
Waxa uu sheeay Xildhibaanka dadka wada abaabulka xilka looga tuurayo Laftagreen in ay yihiin dad ka yimid qurbaha oon la socon dhibka laga maray dhismaha maamulka ,waxa uuna cadeeyay in ay la dagaalayaan cidii isku dayda in ay carqaladeeso jiritaanka maamulka Koonfur Galbeed.
Warkan ayaa soo baxaya xilli shalay uu xafiiska Madaxtooyada la wareegay Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, waxaana Madaxweyne Xasan Sheekh la socda siyaasiyiin si weyn uga soo horjeeda Madaxweynaha Koonfur Galbeed.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo kan Galmudug ayaa laga cabsi qabaa in xilka laga tuuro iyaga oon waqtigooda dhammaan, waxaana labadan Madaxweyne si aan ganbasho laheyn u taageereen Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Farmaajo.